Shiikh Shariif Oo iibsaday Diyaarad u Gaara-(Private Jet) - iftineducation.com
Shiikh Shariif Oo iibsaday Diyaarad u Gaara-(Private Jet)
aadan21 / March 7, 2012
Shiikh Shariif Oo Gatay Diyaarad
iftineducation.com – Sida lagu daabacay wargeys kasoo baxa dalka Maraykanka, waxaa la xaqiijiyay in Madaxweynaha Somalia Shiikh Shariif oo inta badan u yahay madaxweyne aad u safra isla markaana uu socdaalkiisu badan yahay sidaa daraadeedna uu iibsaday Diyaarad gaar ah.
Tamashlaynta Madaxwaynaha Somaaliya Sheekh Shariif oo u iibsaday diyaarad aan la shaacin Qiimaha la soo siiyay, ayay dad badan oo u dhuun daloola arrimaha siyaasada ee Somaliya ku macneeyeen siyaabo badan.
Qaar ayaa ku sheegay inay tahay mid macno daro ah, halka qaarna yidhaahdeen waxa ay tahay mid fududaynaysa howlaha uu qaranka u hayo iyo in uu meel walba ku gaadho saacado kooban halkii uu kolba sugi lahaa diyaarad meel kale looga soo kireeyo. taasina ay baday madaxweynaha in uu lumiyo fursado badan iyo inuu ka qayb geli kari waayo shirar wax badan usoo kordhin kara umadda Somaliyeed.
Shirkada KLM waxa ay sanadihii 2009 iyo 2010 Kira ahaan uga qaadatay Madaxweyne Shariif oo Keliya Lacag kor u dhaafaysa 3-Milyan oo Doolar oo Socdaalkii Madaxweynaha oo kaliya ku baxday.
Ma cadda Qiimaha rasmiga ah ee diyaaradaasi lagu soo iibiyay, haddana waxaa iska muuqata in madaxweynuhu uu socdaal iyo tamashleyn isaga jiro halka kumanaan qof oo Soomaaliya ay macluul, gaajo iyo qaxaatinimo ay ku hayso.
Madaxweynaha ayaa diyaaraddan waxa uu ka bixiyay qiimo aad u farabadan, taasi oo uu ugu tallo galay inuu ku aado safarada iyo socdaalada iyo Tamshalyinta joogtada ah ee uu madaxweynuhu bil walba ubaxo.
Sida lagu daabacay wargeys kasoo baxa dalka Mareekanka ayaa waxaa la xaqiijiyay in Madaxweynaha Soomaaliya Shariif oo inta badan u muuqanaya madaxweyne aad u safra, isla markaana uu socdaalkiisu badan yahay uu iibsaday Diyaarad gaar ah oo mar waliba garoonka u taagan, kadib markii ay dhibaato ku noqotay inuu mar walkba diyaaradda uu ku safrayo uu ka dalbado dalalka Itoobiya iyo Kenya.
Waxaana shacabka Somaliyeed isweydiinayaan waxa keenay in uu Mdaxweyne Shariif iibsado diyaarad uu mar walba raaco iyada oo la ogyahay abaarta, dhibaatada iyo macaluusha ka taagan dalka.
Manchester City Oo Ganaaxeysa Balotteli ,Kadib Markii Lagu Arkay? teamtalk.com
Dowlada Holand oo walaac kamuujisey Dulimaadyada Turkish Airlines ee Magaalada Muqdsho